Trotraka fa tsy milefitra ! - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Trotraka fa tsy milefitra !
Razafimamonjy Noro Hanitra il y a 3 mois
Mitohy hatrany fandrenesanao ny Feon'i Lakroa eo amin'ny Radio RDB. Indro ary ilay matoan-dahatsoratra norenesinao ny talata alina eto. Mbola tsy nivoaka moa ny fanapahan-kevitra momba ny fametraha-pialan'ny mpikambana ao amin'ny governemanta.
Telopolo taona lasa izay, sabotsy ny andro tamin’io 10 aogositra 1991 io. Daty tsy hay hadinoina teo amin’ny tantaran’i Madagasikara. Efa ana hetsiny ny mpanao fihetsiketehana isan’andro teo amin’ny Araben’ny Fahaleovantena, tao Antananarivo, nandritra ny volana maro, notarihin’ny hery velona. Nirohotra nankeny amin’ny Lapan’Iavoloha izy ireo, nitaky ny fialan’ny filoha Ratsiraka Didier tamin’io andro io. Tsy idirana eto ny antsimpirihany manodidina ny nahatonga io diaben’ny fahafahana, fa ny antony fototra dia ny maharary ny Malagasy amin’ny fiainany andavanandro tsy voajerin’ny mpitondra.
Tifitra variraraka tokoa no nitsena ireo mpanao fihetsiketsehana. Nisy aza ny filazana fa nisy grenady nalevina tany anaty tanimbary manodidina ny lapa. Ireo izay nahahitsaka ireny dia naratra mafy na maty mihitsy. Avy eny ambony angindim-by kosa ny filoha Ratsiraka no re tamina fandraisam-peo voatahiry, nibaiko hoe : tifiro amin’ny tongony ! Maro ireo olona nitsipatsipaka, naratra sy maty. Vitavita foana tsy nisy tohiny izany mandraka ankehitriny. Dia toy izany raha fintinina ny niseho tamin’iny andro iray, nanamaloka ny tantaram-pirenena iny.
Eo amin’ny tantarantsika dia maro tokoa ny hetsika nitakiana fahaleovantena, fahafahana, fialana amin’ny fanararaotam-pahefana sns… Nisy hatrany ny naratra sy ny aina nafoy. Dia misedra olana ny fiarahamonina sy ny toe-karena. An-taonany ny fanarenana ireny ratra ireny. Misy aza ny tsy voarina mihitsy mandrak’ity ny androany. Mby aiza àry i Madagasikara amin’izao fotoana izao ?
Mahonena fa tsy mbola tafavoaka ny ala aloha hatreto, ary azo lazaina ho tena mbola anaty olan’ny fahantrana mangitsokitsoka. Tsy misitraka ireo lazaina fa harem-be ambany sy ambonin’ny tany ary anaty ranomasina ny ankamaroan’ny mponin’ity Nosy ity. Olom-bitsy no mbola mifehy ny politika sy ny toe-karena. Hantsana lalina no manasaraka an’izy ireo amin’ny sarambabem-bahoaka. Miteraka fitsiriritana izany, mitondra amin’ny hasosorana, ary mahavelom-panontaniana maro.
Ireny rehetra ireny no maha raiki-tampisaka ao amin’ny ankamaroan’ny olona an’ilay « fankahalana ny politika sy ny mpisehatra ao anatiny ». Fankahalana mitarika amin’ny tsy firaharahaina ny politika. Tsy firaharahaina mahatonga an’ireo mpanararaotra ho afaka manararaotra hatrany. Dia tonga amin’ny tadiaviny izy ! Hitan’izy ireo rahateo fa ankehitriny dia efa torovan’ny hasarotam-piainana ny tokantrano maro, izay nanantena ny tsy misy. Ny takaitran’ny valanaretina Covid 19, manginy fotsiny.
Trotraky ny krizy miverimberina ny fiarahamonina. Mahatsikaritra ihany koa ny olona fa toa « matimaty sy naradratra foana » ireo nandatsaka ny ràny raha ny toe-java-misy eto amin’ny firenena ankehitriny no jerena. Rariana rahateo ny tsy hisian’ny fifanandrinana hery tsy mitovy tahaka ireny niseho taloha ireny intsony.
Na mitady fitoniana aza anefa isika, tsy midika izany fa hahazo hanampatra ny fahefany sy hanao Ramatahora izay rehetra hifandimby eo amin’ny fitondrana. Tsy midika koa izany fa hatao anaran-tsy very ny demokrasia dradradradraina, ka izay tsy mitovy hevitra amin’ny mpitondra dia azony atsangana ho fahavalony. Tsy misy afaka hitompo teny fantatra fa irery sy hany tokana manana ny fahamarinana rehetra manko eto amin’ity tany ity. Indrindra fa firenena no tantanina ary vahoaka no ampandrosoina. Ary indrindra : mbola mitombina foana ilay hoe « aleo halan’andriana toy izay halam-bahoaka ».